Hull, Bottom & Tank Corrosion Protection (၃) ~ MSU Portal
7/02/2012 06:21:00 PM ကိုထွန်း No comments
marine growth တွေကို၊ hard marine growth နဲ့ soft marine growth ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ mollusks, barnacles, tubeworms, အချို့ algae တွေနဲ့ mussels အစရှိတဲ့၊ အဏ္ဏဝါဇီဝသက်ရှိတွေကို၊ hard marine growth အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ အချို့ algae တွေနဲ့ anemones, hydroid sponges နဲ့ slime အစရှိတဲ့ အဏ္ဏဝါဇီဝသက်ရှိတွေကိုတော့ soft marine growth အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ hard marine growth တွေကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ fouling ကို၊ Macro-fouling လို့ခေါါပြီး၊ soft marine growth တွေကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ fouling ကိုတော့ Micro-fouling လို့ခေါါပါတယ်။ သဘေ်ာတွေရဲ့ sea water system မှာ Macro-fouling နဲ့ Micro-fouling (၂) မျိုးလုံးဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
Fig. Hard fouling
Fig. Soft fouling
MGPS သို့မဟုတ် Marine Growth Prevention System လို့ခေါါတဲ့၊ vulnerable material ကို၊ anode အနေနဲ့တတ်ဆင်ကာ၊ current ပေးသွင်းတဲ့  စနစ်ဟာ၊ Macro-fouling ကိုသာလျှော့ချနိုင်ပြီး၊ Macro-fouling နဲ့ Micro-fouling (၂) မျိုးလုံး ကို၊ လျှော့ချဖို့အတွက် Sodium Hypochloride (NaOCl) MGPS စနစ်ကို၊ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Sodium Hypochloride MGPS စနစ်ဟာ၊ sodium hypochlorite ကို၊ သဘေ်ာရဲ့ sea water system အတွင်းသို့၊ anti-fouling agent အဖြစ်ပေးသွင်းတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Typical Arrangement of Sodium Hypochloride (NaOCl) MGPS Piping Diagram
ပင်လယ်ရေမှာပါဝင်နေတဲ့ ဆားဓါတ်လို့ခေါါတဲ့ sodium chloride (NaCl) ဟာ၊ generating chamber ထဲမှ၊ anode နဲ့ cathode ဆိုတဲ့၊ electrodes (၂) ခုနဲ့ထိတွေ့ရာမှ၊ electrolysis action ပေါါပေါက်လာ ပြီး၊ anti-fouling process ကိုဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ chamber ဟာ၊ cathode ဖြစ်ပြီး၊ anode အနေနဲ့ vulnerable material တခုခုကို၊ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
generating chamber ထဲမှာ၊ anode မရှိတဲ့အခါ၊ chemical and electrochemical reactions အနေနဲ့ chlorine မှာ၊2Cl ⇔ Cl₂ + 2e- ဆိုပြီးဖြစ်ပေါါပါတယ်။ cathode မှာတော့၊ ပင်လယ်ရေမှ OH-ions တွေဟာ၊2H2O + 2e- ⇔2OH- + H3 ဆိုပြီးဖြစ်ပေါါပါတယ်။ generating chamber ထဲမှာ၊ anode ရှိတဲ့အခါ၊ OH- ions နဲ့ Na+ ions တို့ဟာ၊ Cl2 ဆိုတဲ့ Chlorine နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး၊2NaOH + Cl₂ ⇔ NaOCl + NaCl + H2O ဆိုတဲ့၊ equation အရ၊ sodium hypochlorite ကိုထုတ်ပေး ပါတယ်။ အကယ်၍ sea water မှာ၊ calcium နဲ့ magnesium တွေပါလာခဲ့ရင်၊ secondary reaction အနေနဲ့ generating chamber ထဲမှာ sodium hydrates နဲ့ sodium carbonates တွေဖြစ်ပေါါတတ် ပါတယ်။
generating chamber ထဲမှ၊ sodium hypochlorite solution တွေကို၊ sea chests မှာရှိတဲ့၊ chlorine injection points တွေအထိရောက်အောင်၊ ပေးပို့လိုက်တဲ့အခါ၊ sea chest မှ ဝင်လာမယ့် ပင်လယ်ရေနဲ့  အတူ၊ sea water system အတွင်းကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ chlorine-active sea water system နဲ့ထိတွေတဲ့အခါ mussels လို၊ အခွံပါတဲ့ ခရုတွေကတော့အခွံကိုပိတ်ကာ ကာကွယ်နိုင်ပေမယ့်၊ sea water system ဟာ၊ chlorine-active ဖြစ်နေတဲ့အခါ၊ ရည်ရှည်မှာတွယ်ကပ်မနေနိုင်တော့ပါဘူး။ Chlorine ဟာ၊ toxicant လို့ခေါါတဲ့ အဆိပ်အတောက်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ sea water system အတွင်း၊ 0.2 ~ 0.5 ppm ပမာဏခန့် continuous chlorination အနေနဲ့ရှိနေခဲ့ရင်၊ marine growth တွေဟာ fouling အနေနဲ့ တွယ်ကပ် မနေနိုင်တော့တာတွေ့ရပါတယ်။
corrosion တွေကို၊ Uniform Corrosion, Concentration Cell Corrosion, Inter-granular Corrosion ဆိုတဲ့ Exfoliation Corrosion, Atmospheric Corrosion, Erosion Corrosion, Fretting corrosion, De-alloying Corrosion, Formicary Corrosion ဆိုတဲ့ Ant-net corrosion, MIC ဆိုတဲ့ Microbiological Corrosion, Galvanic Corrosion သို့မဟုတ် Bimetallic Corrosion, Crevice Corrosion ဆိုတဲ့ Pitting Corrosion , Cracking ဆိုတဲ့ Stress Corrosion, Cavitation Corrosion, Hydrogen Embitterment corrosion, Immunity corrosion နဲ့ Corrosion Fatigue ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင် ပါတယ်။
သဘေ်ာရဲ့ Hull နဲ့ Bottom နေရာတွေမှာ၊ ဖြစ်ပေါါတဲ့ corrosion ကို၊ Uniform Corrosion နဲ့ Microbiological Corrosion ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ uniform corrosion ဟာ၊ electrochemical reaction ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတာဖြစ်ပြီး၊ Microbiological Corrosion ကတော့၊ marine organisms လို့ခေါါတဲ့၊ အဏ္ဏဝါဇီဝသက်ရှိတွေတွယ်ကပ်ရာမှတဆင့်၊ ပေါါပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ Hull, Bottom နဲ့ Tank တွေမှာ၊ electrochemical reaction ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ corrosion ကို၊ Cathodic Protection System လို့ခေါါတဲ့၊ Sacrificial Anode Protection System နဲ့ Impressed Current Cathodic Protection System တွေအသုံးပြုပြီးလျှော့ချကြပါတယ်။
သဘေ်ာရဲ့ Hull နဲ့ Bottom နေရာတွေမှာ အဏ္ဏဝါဇီဝသက်ရှိတွေတွယ်ကပ်မှု တနည်းအားဖြင့် fouling ကိုလျှော့ချဖို့နဲ့ Microbiological Corrosion ကိုလျှော့ချဖို့ anti-fouling paint ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ Sea water system မှာ အဏ္ဏဝါဇီဝသက်ရှိတွေတွယ်ကပ်ရာမှတဆင့်၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့၊ fouling ကိုလျှော့ချဖို့ နဲ့ Microbiological Corrosion ကိုလျှော့ချဖို့အတွက်၊ MGPS စနစ်ကိုတတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ Sodium Hypochloride (NaOCl) MGPS စနစ်ကို တတ်ဆင်ခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Image credit to : http://www.asminternational.org/, http://www.stoprust.com/, http://masteel.co.uk/
Posted in: ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ